Google Pixel wuu isdifaacayaa sababo la xiriira dhibaatooyinkiisa joogtada ah | Wararka IPhone
Google Pixel wuu isdifaacayaa sababo la xiriira dhibaatooyinkiisa joogtada ah
Waxaa ku amaanay dhamaan saxaafada markii la bilaabay, calanka cusub ee Google, midka loogu talagalay inuu si toos ah ula tartamo awoodaha iPhone iyo Galaxy ayaa ka gudbay qabsashada boggaga hore oo galay meel labaad iyadoo aan saameyn badan ku laheyn warbaahinta. Ka dib markii "buunbuuninta" bilowga ah ee amaanteeda sare loo qaaday kamaradeeda oo loo soo saaray inay tahay kamaraddii ugu fiicnayd ee abid taleefannada casriga ahi waligood soo maraan, rajada laga qabo Google Pixel aad bay u qaboojisay, qayb weyn oo ka mid ah niyad jabka inbadan oo ka mid ah Isticmaalayaasha isticmaalayaasha markay taas xaqiijinayaan Taleefanka casriga ah ee casriga ah, kaas oo leh qiime bilow ah oo ah 759 1000 qaabkiisa aasaasiga ah isla markaana ka sarreeya € XNUMX ee dusha sare, ayaa leh dhibaatooyin ka badan inta la doonayo.
1 Arimaha kamaradaha
2 Dhibaatooyinka Bluetooth
3 Dhibaatooyinka hadalka
4 Dhibaatooyin aad u tiro badan oo loogu talagalay "mobilada ugu fiican suuqa"
Wax badan oo Halo ah pic.twitter.com/xXv4b3QUoV
- Danny Winget (@superscientific) October 22, 2016
Kaamiradda Pixel waxay ku guuleysatay dhibicdii ugu sarreysay abid ee taleefannada casriga ah ee 'DXOMark', oo leh 89 dhibcood oo cajaa'ib leh oo ka dhigaya meel ka sarreysa iPhone 7 iyo Galaxy S7 Edge, calaamadaha waaweyn ee shirkadaha waaweyn ee gacanta ku haya suuqa taleefannada casriga ah. Si kastaba ha noqotee, markii aaladihii ugu horreeyay ay bilaabeen inay gaaraan iibsadayaashooda, waxaa la kulmay lama filaan aan fiicnayn oo ah in ifafaalaha "Lens Flare" uu ka badnaa sidii caadiga ahayd. Waa milicsi ay wadaagaan dhammaan kaamirooyinka suuqa yaalla, laakiin waxaan ku celcelinaynaa, qalabkan wuxuu ku dhacaa si ka badan sidii caadiga ahayd, sida lagu muujiyey isbarbardhigyada qaarkood ee qaadashada isla xaaladdii qalabka mobilada, kaliya kamaradda Pixel ayaa soo saarta saameyntan.
Google waxay qirtay guuldarada, wayna hagaajin doontaa, inkasta oo ay qayb uun tahay, Waa dhibaato xagga qalabka ah oo xalka ay ku soo bandhigayaan barnaamijka waa qayb uun. Isticmaalayaashu waa inay adeegsadaan qaabka HDR + si ay uga fogaadaan waxyaabahan detellos-ka ah, iyadoo qaabka caadiga ahna ay u sii socon doonaan sidii hore.
Dhibaatooyinka afhayeenka ayaa sidoo kale la yimid Bluetooth oo ku xirmaya gacmaha-aan-lahayn ee noocyo badan oo baabuur ah. Dhinaca kale, isticmaaleyaal badan ayaa ka cabanaya in aysan ku xirmi karin aaladaha gacanta, laakiin marka lagu daro, kuwa maamula inay isku xirmaan waxay ka cawdaan in tayada codka ay ka tagto waxyaabo badan oo la doonayo. teerminaalkuna wuxuu kudhamaadaa goynta ka dib waqti aan aad u dheerayn. Ugu dambeyntiina, qaar waxay yiraahdaan ma jiraan dhibaatooyin isku xirnaanta, laakiin marka wicitaan la sameeyo waxay la kulmaan guuldarro ka hortageysa adeegsiga gacmaha-xorta ah.
Xaaladdan oo kale hadda ma jiro wax xal ah oo ay daabacday Google, iyaguna wax khalad ah kama qaadan sababta oo ah dhab ahaan ma yaqaanaan meesha ay ku taal. Waxay noqon kartaa dhibaato Android 7.1 ah, maaddaama ay tahay nidaamka hawlgalka ee boosteejooyinkani heer ka gaadhaan, laakiin in yar Isticmaalayaasha noocyo kale oo leh noocyadan horeyba loo rakibay waxay yiraahdaan wax dhib ah kuma lahan isku xirnaanta Bluetooth, sidaa darteed dadka isticmaala Pixel xoogaa wey wareersan yihiin.
Ugu dambeyntiina waxaan leenahay dhibaato kale oo guud oo naga haysata hadalka aaladda, taas oo keenta in dhawaqa uu si aad ah u qalloocan yahay marka uu sarreeyo. Maaha inay jiraan wax buuq ah, wax caadi ka ah boosteejooyin badan, laakiin dhalanrog runti xanaaq badan taasina waxay ka hortageysaa dhageysiga ku filan ee dhawaqa ciyaaraha fiidiyowga, muusikada ama filimada. Waxaan kuusoo bandhigeynaa fiidiyoow kaas oo dhibaatadan dhibsashada leh looga mahadcelinayo.
Sidaad u aragto, dhalanroggu wuu ka fog yahay inuu ahaado dhibaato yar oo runtii waa wax laga xumaado. Reddit waxaa ka buuxa kiisas la mid ah iyo Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa sheegaya inay heleen dhowr boosteejo oo beddelaad ah ka dib markii ay ka cawdeen Google iyo in dhammaantood ay isku dhibaato qabaan.
Dhibaatooyin aad u tiro badan oo loogu talagalay "mobilada ugu fiican suuqa"
Markii Google ay soo saartay Pixel-keeda waxaa jiray amaan badan oo loogu talagalay aaladda heshay dib u eegista aad u wanaagsan ee warbaahinta, laakiin dadka isticmaala ma aysan dhammeynin inay u qalmaan qiimahaas Premium, xitaa intaa ka sii badan marka tartanka ku jira Android uu aad u sarreeyo oo ay jiraan terminaallo leh qeexitaanno wanaagsan oo qiimihiisu yahay kala bar, oo leh isla nidaam hawlgal. Way cadahay in aaladaha oo dhami dhibaatooyin ka soo gaadhaan, xitaa iPhoneka awooda leh ayaa ku leh dhamaan moodooyinka la sii daayo sanadba sanadka ka dambeeya, laakiin kiiskan waxay umuuqataa inay jiraan dhibaatooyin aad u tiro badan noloshiisa gaaban. Intaa waxaa dheer, isku mid maahan in la furo malaayiin terminal iyo in qaarkood ay dhibaatooyin qabaan, sida iPhone ama Galaxy S7, marka loo eego in tirada aaladuhu aad uga hooseeyaan oo ay dhibaatooyin badani u muuqdaan, maadaama ay u muuqato kiiska leh Google Pixel.
Dhibaatooyinka helitaanka iyo guuldarrooyinka ay isticmaaleyaashu ka warbixinayaan, iyo sidoo kale xalalka yar iyo kuwa aan dhammaystirnayn ee Google ay u muuqato inay bixinayaan, dhammaan buunbuunintii ay heshay terminal u muuqday in ay suuqa kala jabeyso ayaa noqotay wax aad uga fudud. Waxay umuuqataa in taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee "Sameeya Google" uusan lahaan doonin soo dhaweyn wanaagsan oo la filayo, in kasta oo aan weli sugeyno inaan qiimeyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Google Pixel wuu isdifaacayaa sababo la xiriira dhibaatooyinkiisa joogtada ah
Had iyo jeer "bogaadin" ugu horreeya nooc kasta waa "kor u qaadis $" marka illaa inta si dhab ah loo tijaabinayo wax walba waa Suuqgeyn saafi ah.
Waan kugu raacsanahay Vlm. Taasi waxay sidoo kale u shaqeysaa Apple, iyada oo iPhone 7 ay ka maqan tahay hal-abuurnimo iyo iib aad u hooseeya, sax?
Ku jawaab luislaborda
Sida iPhone 6skeyga, oo si lama filaan ah u xiro batari 40% ah, hadii aadan laheyn fiilo kuu dhow ma isticmaali kartid, waxaan wacaa Apple waxayna ii sheegeen in nambarkayga taxanaha uusan soo galeynin barnaamijka bedelida batteriga, laakiin u dir si aad u dayactirto, u dir oo way ii soo celiyaan ka dib 15 maalmood oo la mid ah sidii markii hore, marka la soo koobo, terminal weyn oo ka dib 8 bilood oo aan iibsanayay ka dib aniga waxba iima tarin
"Xitaa intaa ka sii badan marka tartanku ka socdo Android aad buu u sarreeyaa oo waxaa jira boosteejooyin leh tilmaamo ka wanaagsan oo qiimihiisu yahay kala badh ..." Oo aad u qurux badan maxaa yeelay pixel-ka ayaa fool xun c ... ka dibna waxay ka cabanayaan naqshadda "joogtada ah" iphone ...
Waxaan doorbidaa hal milyan oo jeer naqshadeynta «sii wadida» in aberigaas, indha-indheyntaas dabiiciga ah ee loo yaqaan Google Pixel!
Spotify wuxuu cusbooneysiiyaa barnaamijkiisa Mac isagoo ka dhigaya mid la jaan qaada Touch Bar iyo AirPods
Qarxinta Birds Birds, Rovio ee xujo cusub sii daayay